Real Gangster Crime အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（101.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Real Gangster Crime
Ghetto Gangster အျောဒူဘဝအတှကျ Simulator အဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးအမြဲတည်ရှိလိမ့်မည်, ဤဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒီအခမဲ့ဂိမ်းထဲမှာအောင်မြင်မှုရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ဖို့ရှည်လျားသောဆူးလမ်းကြောင်းကိုသင်ကြိုးစားရမယ်။ ဒီမြေအောက်ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်မှုစျေးနှုန်းကအရမ်းမြင့်တယ်၊ လူအနည်းငယ်ကသာထိပ်ကိုရောက်နိုင်တယ်။ သင်၏စွမ်းရည်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော 3D တတိယလူသေနတ်သမား RPG element များဖြင့်စမ်း။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော 3D ကမ္ဘာရှိလမ်းဘေးဘ ၀ သို့ ၀ င်ရောက်ပါ။ မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးနေ့စဉ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိုသင်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ကြမ်းတမ်းသောဥပဒေများကျင့်သုံးသောအန္တရာယ်ရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာသည်သင်၏ဘုန်းအသရေအားလုံးရှေ့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက၊ ရှေ့သို့သွားပါ၊ ဤမြို့ရှိအစစ်အမှန်ဂိုဏ်းဝင်သူတိုင်းကိုပြပါ၊ ပြိုင်ဘက်အတုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးကြီးမားသောမြေအောက်အင်ပါယာကိုခေါ်ပါ။
The plot of ဂိမ်းသည်စုရုံးနေထိုင်ရာဒေသများဝိုင်းရံထားသည့်ခေတ်သစ်မြို့ကြီးတစ်မြို့တွင်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောမိုးမျှော်တိုက်နှင့်ဇိမ်ကျဘဝသည်ဤမြို့ကိုသဲကန္တာရတွင်အိုအေစစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤအပြစ်ရှိသောမြို့သည်ဘယ်သောအခါမျှအိပ်မပျော်ဘဲကျောက်တုံးတောအုပ်ကိုစိန်ခေါ်သူများကိုအလင်းရောင်ဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်ဘုန်းအသရေအတွက်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှု၌သင်၏လက်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တာဝန်များကသင့်အားပိုမိုလေးနက်သောလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည့်လိုအပ်သည့်ဂိမ်းအရင်းအမြစ်များကိုရရှိရန်သင့်အားစောင့်နေသည်။ လူတိုင်းကသူ့ကိုယ်သူနေထိုင်သည့်ခက်ခဲသောလမ်းဘေးဘဝကိုသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အရူးကျည်ဆန်များဤတွင်ပျံသန်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂိုဏ်းများသည်အကြီးအကျယ်ပစ်ခတ်မှုများနှင့်စစ်ဆင်နွှဲနေသောကြောင့်မြို့၏လမ်းများပေါ်တွင်အဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Quest တွေကိုသွားပြီးဒီမြို့ကိုမည်သူနှင့်မည်ကဲ့သို့အုပ်ချုပ်သည်ကိုသင်ပိုမိုသိသည်။
သင်မပျံ့လွင့်နိုင်သည့်ကြွယ်ဝသောအာဆင်နယ်အသင်းရှိလိမ့်မည်။ အေးမြခြင်းနှင့် pumped အမှုအရာဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ သွက်လက်ခြင်း၊ လုံခြင်း၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သောကိရိယာများနှင့်လက်နက်များတွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ လက်နက်စတိုးဆိုင်၌သင်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုတွေ့လိမ့်မည်။ အရသာတိုင်းအတွက်အရာများရှိပါသည်။ အသေးငယ်ဆုံးဓားမှ စတင်၍ သင်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အင်အားကြီးသောစက်သေနတ်တစ်ခုအထိဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးအထိဆွဲယူနိုင်ပြီးမည်သူကမှရပ်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ဇာတ်ကောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သူ၏ပုံသဏ္uniqueာန်မှာထူးခြားသောကြောင့်သူသည်သင်၏စစ်သူရဲ ဖြစ်၍ သူသည်စတိုင်ကျသင့်သည်။ မင်းရဲ့သူရဲကောင်းရဲ့ပုံကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဇာတ်ကောင်အတွက်အဝတ်အစားများကြီးကြီးမားမားရှိသည်။ စတိုးဆိုင်၌သင့်တွင် ဦး ထုပ်များ၊ ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်များ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ မျက်မှန်များ၊ အမျိုးမျိုးသောအ ၀ တ်အထည်များသည်သင်၏သူရဲကောင်း၏ကျန်းမာရေး၊ အချို့သောအရာများကအပိုစူပါပါဝါများကိုဖွင့်ပေးသည်။
စတိုးဆိုင်တွင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသောကိရိယာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကိုမြို့လမ်းတွေပေါ်မှာတွေ့နိုင်ပြီးရန်သူတွေလက်ထဲကနေယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပါက၎င်းသည်သင့်အားစစ်တိုက်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဒီဂိမ်းတွင်ကားအစီးအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သာမန်မြို့ပြကားများ၊ အားကစားကားများ၊ SUVs များ၊ ထူးခြားသောကားများ၊ SCI-FI ကားများဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင်၌သင်အားကောင်းသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွေ့လိမ့်မည်၊ သူတို့သည်သင့်ကိုလိုက်စားရာမှအလွယ်တကူထွက်ခွာသွားစေလိမ့်မည်။ အားကောင်းသောလက်နက်အင်အားတောင့်တင်းသည့်သင့်တင့်ကားသည်သင့်ကိုစောင့်နေပြီး၊ တင့်ကားသည်ဂိမ်းတွင်အထိရောက်ဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်သည်သင့်အားမည်သည့်ပစ်မှတ်ကိုမဆိုတိုက်ခိုက်ရန်၊ လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင်ရဟတ်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပုံ၏သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြို့မြေပုံတွင်များစွာသောအားဖြင့်အခမဲ့ဂိမ်းအရင်းအမြစ်များသည် လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ငွေများ၊ သင်လိုအပ်သမျှမှာ၎င်းတို့အားရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ဤအခမဲ့ဂိမ်းသည်အပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးကိုပေးထားပြီးမြို့ကိုစူးစမ်း။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများကိုရှာဖွေသည်။ မြို့ထဲကားတစ်စီးဖြင့်ကားမောင်း။ သီချင်းနားထောင်ရုံသာလုပ်နိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Real Gangster Crime 5.6.4
Leeeeeeeeewweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee well Hz um ttyl ttyl ttyl g t.v. dc rec eeeeeeeeeeeeeeeerrgleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee r j j g i y l g j egilpleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee r r t I I was thinking flap is full um jeeeeeedidgovt is uhh idc pc pc pc? Pc oz u if" lb: I pin I've I ttc t.v. Yves uhh yuh u uhh/ uhh uhh I g g g g g y u y u u u y t y t r t g h h u i i leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
R ka Phyo
Eaint Phyu Thant